Inona no atao hoe spam email? Torohevitra mahasoa avy amin'ny Semalt Ahoana ny fandefasana ny mailaka manan-danja avy amin'ny ordinateran'ny spam
Email spam, izay antsoina hoe mailaka fanelezana, dia ny hafatra tsy fantatra na hafatra alefan'ny mailaka. Raha ny marina, ampiasain'ny spammers ity teknika ity hanaparitaka ny viriosy sy ny viriosy amin'ny aterineto. Saika ny mpampiasa mailaka rehetra no miatrika ity olana ity isan'andro satria ny kaonty mailaka dia azon'ireo spambots. Mametraka ny adiresinao mailaka amin'ny lisitra izy ireo ary manohy mandefa hafatra tsy misy ilàna azy. Mampiasa ireo bots ireo ny spam mba hamoronana lisitra fizarana mailaka amin'ny isa marobe. Raha toa ka notononina voalohany tamin'ny mailaka tsy fantatra tamin'ny taonjato faha-19 ny adiresy imailaka tsy fantatra, dia nahazo fankasitrahana betsaka tamin'ny taonjato faha-20 izy rehefa nanjary nahazatra ny fidirana amin'ny aterineto tany ivelan'ny sehatra fikarohana sy akademika. Eto i Michael Brown, mpitantana ny Success Manager Semalt , dia nizara toro-hevitra mikasika ny fomba hitazonana ny mailaka lehibe ao amin'ny ordinateran'ny Spam.
1. Ampiasao ny teknolojia fampandrosoana fampindramana:
Ny teknikam-pamokarana fampindramana dia ampiasain'ny orinasa lehibe sy orinasa marobe. Ny zavatra ataon'izy ireo dia ny fametrahana plugins manokana izay manampy amin'ny fisorohana ny mailaka maika sy ara-drariny tsy hivoaka amin'ny ordinateran'ny Spam. Ao amin'ny WordPress, misy plugins amina am-polony no mahazo tombony, fa ny Plugins tena tsara indrindra sy miavaka indrindra dia ny plugin Whitelist. Mora ny mametraka sy mihetsika avy hatrany.
2. Ampiasao ireo mpitsikilo spam alohan'ny fandefasana na handefa mailaka:
Alohan'ny handefasanao na handraisanao mailaka dia tokony hampiasa solosaina maromaro manokana ianao, izay mifandray amin'ny ID ny e-mailanao ary hanampy anao hamantatra ny mailaka ara-dalàna sy tsy ara-dalàna. SpamAssassin dia fitaovana lehibe hanombohana. Raha te hisoroka ny rindrambaiko na manokatra ny mailaka tsy misy ilana azy ianao, dia azonao atao ny mametraka ity programa ity amin'izao fotoana izao. Azonao atao ihany koa ny manandrana ny tolotra IsNotSpam, izay manampy amin'ny fanamarinana ireo zavatra manan-danja aminao ary mampiditra mailaka izay tsy midika na inona na inona aminao.
2. Mialà amin'ireo Blacklists:
Raha toa ka ao anaty lisitra maintimainty ny servere e-mail, dia sarotra sy sarotra ny mandefa hafatra ara-dalàna amin'ny fotoana mety. Mba hisorohana an'io olana io dia tokony hesorinao haingana araka izay tratra ireo lisitra ireo. Voalohany, tsy maintsy manamarina ny lisitry ny mainty mailaka ianao ary hamantatra raha toa ianao ka ao anaty lisitra mainty na tsia. Raha vantany vao vita izany dia tsy maintsy manaraka ireo mpanolotra na tranonkala izay nanampy anao tamin'ny lisitra maintimolaly izy ireo ary nandresy lahatra azy ireo momba ny maha-ara-drariny azy.
3. Tazomy ireo teboka tsara momba ny soratra:
Anontanio ireo mpanolotra anao mba hitazona ny mari-pahaizana ara-tarehintsoratra mety amin'ny tarehin-javatra rehefa manomana sy mandefa anao ny hafatrao. Aza mandefa sary maro amin'ny mailaka; Raha tokony ho ianao dia tokony hanana marika sy sary maromaro. Manoro hevitra izahay fa ny sary rehetra dia tokony hampiasa ny sary JPG sy ny lahatsary YouTube ary tsy miankina amin'ny karazan-javatra hafa.
Ireo teknikam-pitsaboana telo ireo dia hanampy anao hamaha ny mailaka spam. Amin'izay fotoana izay, afaka mahazo ny hafatra ara-dalàna ianao ao amin'ny mailakao ary tsy voatery hikaroka azy ireo ao amin'ny ordinatera Spam na ny ordinatera Trash Source .